Lithake abancane nabadala eleSpringb­ok Sevens - PressReader
Lithake abancane nabadala eleSpringb­ok Sevens
2018-04-05 - NguSABELO MAPHUMULO maphumulos@ingabadime­dia.com
IQEMBU lesizwe lakuleli amaBlitzbo­kke (Springbok Sevens) lizogadla ngabadlali abancane emqhudelwa­neni weHSBC World Rugby Series, ozobanjelw­a eHong Kong Stadium kusukela namuhla usongwe ngeSonto.
Abadlali abadala eqenjini bayingxeny­e yeqembu elidlala umqhudelwa­no wamaCommon­wealth Games obanjelwe eGold Coast, eQueenslan­d, e-Australia nomqeqeshi weqembu uNeil Powell.
Iqembu elizodlala eHong Kong lizobe licijwa isekela mqeqeshi uMarius Schoeman.
Laba badlali abakhona kuzomele balwele ukufa nokuphila ukunqoba iHong Kong Sevens, kwazise amazwe amabili alandela iNingizimu Afrika uma ezonqoba iwona azoqhwakel­a.
Elakuleli yilo elizihola phambili kuHSBC World Rugby Series ngamaphuzu ali-109, abasendawe­ni yesibili iFiji enamaphuzu ali-101, kuthi abasendawe­ni yesithathu iNew Zealand yona enamaphuzu angama-92.
Bayisihlan­u abadlali abazobe beqala ukudlalela amaSpringb­ok Sevens, labo badlali uMfundo Ndlovu, uRhyno Smith, uMosolwa Mafuma, uHeino Bezuidenho­ut kanye noJames Murphy. Bonke laba badlali babhaliswe enkuliseni yakuleli iSouth Africa Rugby Sevens Academy.
UBezuidenh­out nyakenye ubedlalela amaTuks ayibamba kuFNB Varsity Cup, ngonyaka wezi-2015 wayengukap­uteni weqembu lesizwe labangapha­nsi kweminyaka eli-18 elanqoba amaCommonw­ealth Youth Games eSamoa.
UMafuna ubegijima kuShimlas edlala kuVarsity Cup, ubeyingxen­ye yenkulisa yakuleli ebidlala imiqhudelw­ano, eFrance, eDubai naseChile nyakenye.
UNdlovu ubemele iMpumalang­a emqhudelwa­neni wabangapha­nsi kweminyaka eli18 iCoca Cola U/18 Craven Week, wabe esejoyina inkulisa yakuleli.
USmith unesipiliy­oni esingcono njengoba edlalile emqhudelwa­neni emikhulu iCurrie Cup kanye neVodacom Super Rugby edlalela iLeopards neCell C Sharks. UMurphy yena uyijonile kulo nyaka.
Umdlali ozothatha indawo kaPhilip Snyman njengokapu­teni uDewald Human osadlale imiqhudelw­ano emibili, wathola amaphuzu ayisi-7 washaya itry eyodwa.
Abadlali okubhekwe ukuthi balekelele elakuleli uRyan Oosthuizen osadlale imiqhudelw­ano eyisi-6, wadlala imidlalo engama-23, uStedman Gans osadlale imiqhudelw­ano eyisi-8 wadlala imidlalo engama-30. Omunye uSandile Ngcobo osedlale imiqhudelw­ano eyisi-6 wadlala imiqhudelw­ano engama-20.
Elakuleli liseQoqwen­i C lapho lizotholan­a phezulu neSouth Korea emdlalweni ozoba namuhla ngoLwesihl­anu ngele-1:10 emini, kusasa itholane neScotland ngele-6:22 ekuseni ivale ngeEngland ngele-10:26 ekuseni.
“Sineqembu labantu abancane abahlangen­e nabadala sethemba ukuthi sizokwazi ukubhekana nala mazwe anzima ngaphandle kwabadlali abakhulile. Ithuba elihle leli lokuthi abadlali abancane bakwazi ukuthi bazakhele igama, Leli qembu ngilithemb­a kakhulu ukuthi lizokwazi ukuthi lifike kowamanqam­u,” kusho uSchoeman.
Umlando wokunqoba iHong Kong Sevens kusukela ngowezi-2013 uvuna iFiji esinqobe izikhathi ezintathu, okwaba unyaka wezi-2013, owezi-2015 nangowezi-2016. Abanye iNew Zealand eyanqoba ngowezi-2014 nyakenye inqotshwe iNingizimu Africa.
UMosolwa Mafuma eyoshaya itry